कब्जियतबाट छुटकारा पाउन...
बाबा रामदेव मुछिएका चर्चित ५ विवाद
हत्केलाको रेखाले तपाईको भाग्य यसरी बताउँछ
यी दुई खालका स्त्रीमाथि गिद्दे नजर लगाए जीवनमा असफल भइन्छ
केही मानिसहरुले जानेर वा नजानेर जीवनमा गल्तीहरु गर्न पुग्छन् । जसको कारण उनीहरुले पछुताउनु पर्ने हुन्छ। हिन्दु धर्म ग्रन्थमा दुई प्रकारका स्त्रीहरुले वरदान प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुन अनुसार यदि कुनै व्यक्तिले उनीहरुलाई नराम्रो नजरले हेर्यो भन्यो जीवनमा असफलता हात पार्ने देखिन्छ। त्यस व्यक्ति हमेसा समस्याहरुले घेरिएर रहन्छ।
मात्र ६० सेकेन्डमा कसरी निदाउने ?
एजेन्सी । राति समयमा निदाउन नसक्दा मानिसहरुको दैनिकी नै प्रभावित भइरहेको हुन्छ । राम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि निन्द्रा प्यारो हुनु आवश्यक छ । सोही कारणले गर्दा समयमा सुत्नु आवश्यक छ । यहाँ हामीले डा. एन्ड्रिउ विलले राति निदाउन नसक्नेहरुको लागि केही टिप्स दिएका छन् ।
पाकेको केरा मात्रै होइन काँचो केराले पनि स्वास्थ्यको लागि अनेक फाइदा पुर्याउँछ । काँचो केरामा प्रशस्त मात्रामा पोटाशियम हुन्छ । पोटाशियम हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक तत्व हो । यसले रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता बढाउँछ ।
गर्भवती महिलाले किन खानुहुँदैन पास्ता ?